बलिउडका यी ५ महँगा अभिनेत्री, कसको कमाइ कति ?
साउन २५, २०७७
कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले बलिउड उद्योग खस्किएको छ । तर यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि कुन कलाकारको कमाइ कति भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।
यसैबीच बाहुबली अभिनेता प्रभाससँग जोडी बाँध्न दीपिकाले २० करोड भारु पारि श्रमिक लिएपछि उनी सर्वाधिक महँगी भारतीय अभिनेत्री भएकी छन् । यो जोडी नाग आश्विनको निर्देशनमा बन्ने ‘साइफाई फिक्सन’मा एकसाथ देखिन थालेको छ । दीपिका र प्रभासको जोडी बाँध्न निर्माताले महँगो रकम खर्चिएका हुन् ।
बलिउडमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने अभिनेत्रीमा दीपिका पादुकोणसँगै आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा लगायतको नाम अगाडि आउँछ । पछिल्लो समय कुनै पनि फिल्ममा नदेखिएकी अनुष्का शर्मा पनि महँगो नायिकाको गणनामा छिन् । ‘पाताल लोक’ र ‘बुलबुल’को निर्माताका रूपमा समेत काम गरेकी अभिनेत्री शर्माले उत्कृष्ट अभिनयको छाप छाडेकी छन् । यहाँ केही बलिउड अभिनेत्रीको कमाइको चर्चा गरिन्छ :
महँगी अभिनेत्रीको चर्चा गर्दा दीपिका पादुकोणको नाम स्वतः अगाडि आउँछ । उनी सन् २०१८ मा ४८ करोड कमाइ गरेर १०औं नम्बरमा पर्न सफल भएकी थिइन् । तर अहिले उनी चौथो नम्बरमा पुगेकी छन् । उनको पछिल्लो वर्षको कमाइ १११.८ करोड भएको छ ।
आलिया भट्ट पछिल्लो समय अधिक कमाइ गर्ने अभिनेत्रीमा आउँछिन् । उनी सन् २०१९ को फोब्र्सको सूचीमा समेत सामेल भएकी थिइन् । उनको पछिल्लो कमाइ ५९.२१ करोड रहेको छ।
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडा जोनास पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने अभिनेत्रीको टप सय सेलिब्रिटीको सूचीमा पर्छिन् । उनी ४९ नम्बरबाट १४औं मा आइपुगेकी छन् । पछिल्लो समय प्रियंकाको कुल कमाइ २३.४ करोड थियो । इन्स्टाग्राममा धनीको सूचीमा सन् २०१९ की सबैभन्दा धनी भारतीय सेलिब्रिटीका रूपमा पनि उनी मनोनयन भएकी थिइन् । उनले पछिल्लो समय इन्स्टाग्रामको एउटा पोस्ट बराबर १.९२ करोड पाउँछिन् ।
अभिनेत्री तथा निर्मात्री अनुष्का शर्माको सन् २०१९ को कमाइ २८.६७ करोड थियो । उनी सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने अभिनेत्रीको सूचीमा २१औं नम्बरमा पर्छिन् ।
बलिउड अभिनेत्री कैटरीना कैफको अघिल्लो वर्ष कमाइ २३.६३ करोड थियो । उनी धनी अभिनेत्रीहरूको सूचीमा २३औं नम्बरमा पर्छिन् । उनी केही ठूला ब्रान्डका एम्बेसडरसमेत हुन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
तीन दशकसम्म मुद्दाको झमेला
इजरायलसँग बागवानी सम्झौता गर्ने निर्णय
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर सार्क मुलु...
अपराध गुपचुप मिलाउँदा अर्को बलात्कार !
कोरोना भ्याक्सिन बनाएको रुसमा यस्तो छ संक्रमणको पछिल्लो अवस्था
कृपया गोली नहान्नुस् भन्दै जो प्रहरी कार्यालय पुगे
यी हुन् कोरोना प्रभावित विश्वका शीर्ष १५ मुलुक (विवरणसहित)
हालसम्म अमेरिकामा कति पुगे कोरोनाभाइरस संक्रमित ?
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६१ लाख नजिक, हालसम्म कति पुगे मृतक ?
भुटानमा पुगे २७३ कोरोना संक्रमित, हालसम्म एक जनाको पनि भएको छैन मृत्यु
विश्वभर कति पुगे कोरोनाभाइरस संक्रमित र मृतक
सुरु भयो इरानमा कोरोना महामारीको तेस्रो चरण
६५ वर्षीया महिलाको हत्या, दुवै हात बाँधेको अवस्थामा शव भेटियो